सिंहदरबार भित्र फैलियो कोरोना।अब देशमा यस्तो हुँदै? – List Khabar
Home / समाचार / सिंहदरबार भित्र फैलियो कोरोना।अब देशमा यस्तो हुँदै?
सिंहदरबार भित्र फैलियो कोरोना।अब देशमा यस्तो हुँदै?
admin January 18, 2022 समाचार Leaveacomment 32 Views
काठमाडौं, माघ ३। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । सिंहदरबार भित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत चार सचिवसहित सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भईसकेको छ।संक्रमित चार जना सचिवमध्ये तीन जना प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका हुन्।
थप एक जना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका सचिव रहेका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका मात्र ४० कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । अन्य मन्त्रालयलहरुमा कर्मचारी धमाधम बिदा बस्न थालेका छन् । कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई १४ दिन सम्मको कोभिड काज बिदा दिने गरिएको छ । सिंहदरबार भित्र
काठमाडौँ । कपाल सफा राख्ने कुरा गर्दा हप्तामा कतिपटक धुने भन्ने प्रश्न उठ्छ। कोही हप्तामा एक पटक कपाल नुहाउँछन् त कोही ३–४ पटक। हप्तामा यति नै दिन नुहाउनुपर्छ भन्ने कुनै नियम त छैन। तर, सफा हुने नाममा बारम्बार सेम्पु दल्दा कपाललाई नोक्सानी पनि पुग्न सक्छ।
यो जरुरी छैन कि जुन प्रोडक्ट र विधिले अरुको कपाललाई फाइदा गरेको छ, त्यसले तपाईंलाई पनि फाइदा गरोस । कम्तिमा एक हप्ता एउटा रुटिन फलो गर्न सकिन्छ । त्यसमा चित्त बुझेन भने अर्को रुटिनमा जानुपर्छ ।
कपालको स्वास्थ्य र जीवनशैली
तीन दिनमा एक पटक कपाल धुनु ती व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त हुन सक्छ जसको दिनचर्या अलिकति सुस्त छ । हरेक विहान उठेर वर्कआउट गर्ने व्यक्तिहरुको कपाल चिपचिपे हुन्छ । उनीहरुका लागि यो रुटिन सही हुँदैन ।
यसैगरी तपाईंको खानपानको आदतले पनि कति चाँडो चाँडो कपाल धुनुपर्छ भन्ने बताउँछ । तर, सबैलाई हुने एउटा समस्या हो, बढ्दो उमेरसँगै कपाल रुखो हुनु । यस्तोमो नियमितरुपमा सेम्पु प्रयोग गर्नुको साटो कन्डिसनिङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तेलको परवाह नगरौं
सामान्यतया हामी कपाल चिपचिपे हुनुको दोष स्काल्प (कपालको जरासहितको छाला) बाट स्वत निस्कने तेललाई दिन्छौं । अनि यो तेललाई कम गर्नका लागि हामी विभिन्न प्रोडक्टहरु प्रयोग गर्छौं । यसपछि हामी कपाललाई पोषित गर्नका लागि अर्गानिक, एसेन्सियल आयलले मसाज पनि गर्छौं ।
यो एउटा चक्र जसरी घुमिरहन्छ । तर, सत्य के हो भने स्काल्पले उत्पादन गर्ने तेल कपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यस्ता उत्पादनहरुबाट टाढै बस्न राम्रो हुन्छ।
सेम्पु र कन्डिसनरमा सल्फेट्स हुन्छ । यसले तपाईंको स्काल्प र कपालबाट फोहोर तथा तेललाई हटाएर त्यसलाई सफा गर्छ। तर, सल्फेट्सको समस्या के हो भने यसले स्काल्पको प्राकृतिक तेल र पसीना तथा फोहोरयुक्त चिपचिपमा अन्तर भेट्दैन।
सल्फेट्सले प्राकृतिक तेललाई पनि स्काल्पबाट अवशोषित गर्छ । त्यसैले सकेसम्म सल्फेट-फ्री सेम्पू र कन्डिसनर प्रयोग गरौं।
सेम्पु सँधै आवश्यक छैन ।
बारम्बार सेम्पु दल्नाले कपालको प्राकृतिक तेल नष्ट हुन्छ । त्यसैले सँधै सेम्पु दल्नुका साटो कहिलेकाहीँ पानीले मात्रै कपाल सफा गर्न पनि सकिन्छ । कपाल भिजाउने र औंलाले मसाज गरेर फोहोर सफा गर्नुस ।
त्यसपछि सफा पानीले कपाल पखाल्नुपर्छ। कन्डिसनरको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ध्यानमा राखौं कि यसलाई कपालको आधा भागबाट सुरु गरेर तलसम्म लगाउनुपर्छ।
Previous २० र ४० बर्षका आमाछोरा मिलेर गरे सोच्नै नसकिने यस्तो कुकर्म !
Next मकर राशिमा शुक्र ग्रहको ठूलो उथलपुथल: यी राशिलाई अत्यन्त शुभ, कुन-कुन ?